YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 11
Kshatriya Mrâmmâ ·
ရှင်း ရှင်း လေး ၊ ဒေါက် တာ အေး ချမ်း ပြော တာ ရ ဟ္ခိုင် ( ရ ဟိုင် ) ဆို တာ ရ ခိုင် ( ရ ခိုင် ပြည် ) ကို ရည် ညွှန်း တာ လို့ ဆို လို ရင်း ဖြစ် တယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ အဲ ဒီ အ သုံး အ နှုန်း က ရ ခိုင် တွေ ရဲ့ အ သုံး အ နှုန်း မ ဟုတ် ခဲ့ ဘူး ။ လူ မျိုး အ မည် မ ဟုတ် ခဲ့ ဘူး ။
ဥ ပ မာ ထပ် ပြော ရ ရင် ၊ တ ရုတ် တွေ က မြန် မာ ကို မြန် တျန့် လို့ သုံး တယ် ။ မြန် မာ တွေ က ချိုင်း နီစ် ကို တ ရုတ် လို့ ခေါ် တယ် ။ ဆို တော့ မြန် မာ နဲ့ မြန် တျန့်က လူ မျိုး နှစ် မျိုး မ ဟုတ် ဘူး ။
' တ ရုတ် ' ဆို တဲ့ အ ခေါ် အ ဝေါ် တ ရုတ် ပြည် မှာ ရှိ သ လား ? ' မြန် တျန့် ' ဆို တာ မြန် မာ ပြည် မှာ ရှိ သ လား ? အ လား တူ ပြင် သစ် ဆို တာ France မှာ မ ရှိ ဘူး ၊ မ သုံး ဘူး ပဲ ။ အဲ ဒီ လို ပဲ ' ရို ဟိုင် ' ဆို တာ ရ ခိုင် ပြည် မှာ မ သုံး ဘူး ၊ မ ရှိ ခဲ့ ဘူး ။ ဘ င်္ဂ လား စ ကား ပြော သူ တွေ ခေါ် ဝေါ် သုံး စွဲ ခဲ့ တာ ။
လူ မျိုး က ' က လော ' ( ကု လား ) နေ တော့ ရ ခိုင် စစ် တ ကောင်း ၊ အဲ ဒီ တော့ ' က လော ရ ခိုင် ' ။ အဲ ဒါ သူ တို့ က ရ ခိုင် လူ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး ။ သူ တို့ ကို သူ တို့ ရ ခိုင် သား လို့ ခေါ် ခဲ့ ကြ တာ ။ အ ခု လက် ရှိ ကု လား တွေ ကို " ရ ခိုင် သား " (ဝါ) " ရ ဟိုင်း ဂျ " လူ မျိုး တွေ ပါ လို့ သတ် မှတ် လို့ မ ရ ပါ ဘူး ။
အ ခု သိ ထား တဲ့ ဘ င်္ဂ လား နယ် ဟာ ဟိုး ရှေး ယ ခင် က ဟိ န္ဒူ တွေ အုပ် ချုပ် ခဲ့ တာ နောက် ပြီး ဗု ဒ္ဓ ကို လည် ယုံ ကြည် ကိုး ကွယ် ခဲ့ ကြ တယ် ။ ရှေး ဟောင်း ယဉ် ကျေး မူ အ ထောက် အ ထား အ ရ သိ နိုင် တယ် ။ ၁၂ ရာ စု နှောင်း ပိုင်း ၁၃ ရာ စု လောက် မှ အ နောက် ဘက် က မ ဂို လ် တွေ ၊ တ က္ခစ် တွေ နယ် ချဲ့ တော့ မှ ' မ ဟာ မေ ဒင် ' ဆို တဲ့ မူ စ လင် အ စ္စ္စ လမ် ယုံ ကြည် သူ တွေ ဟာ များ ပြား လာ ခဲ့ တယ် ။ မ ဟာ မေ ဒင် တွေ ရ ခိုင် ဘု ရင် များ လက် အောက် မှာ မင်း မူ ထမ်း လာ ခဲ့ ကြ တဲ့ သ မိုင်း အ ထောက် အ ထား တွေ ပဲ ရှိ ခဲ့ တယ် ။ သူ တို့ တွေ က ရ ခိုင် စ ကား လို လဲ ပြော နိုင် ခဲ့ တယ် ။
ဆို တော့ ပြန် ပြော ရ ရင် ရို ဟင် ဂ ( ရ ခိုင် က ) ဆို တာ ရ ခိုင် ( ယ္ခ ခိုင် ) တွေ မ သုံး ခဲ့ ဘူး ၊ ရ ခိုင် ပြည် မှာ မ ရှိ ခဲ့ ဘူး ။ ရ ခိုင် ပြည် ၊ ရ ခိုင် ဒေ သ ကို ရည် ညွှန်း ပြော ဆို တာ ဖြစ် တယ် ။ အ ကယ် ၍ သာ လူ မျိုး တ မျိုး အ ဖြစ် ရှိ ခဲ့ ရင် သ မိုင်း အ ထောက် အ ထား တွေ ဒီ စာ အုပ် ထက် မ က ရှိ မှာ ပါ ။ စ ကား ဘာ သာ ပြန် မ ရှိ တဲ့ ကာ လ မှာ ဒီ လို အ သံ တူ ကြောင်း ကွဲ တွေ ၊ အ မှား ပြန် ဆို တာ တွေ ၊ နား ကြား လွဲ တာ တွေ အ များ ကြီး ရှိ နိုင် တယ် ။
အဲ ဒီ စာ လုံး ကို ဘယ် နှစ် လုံး သုံး လို့ ဘယ် သ မိုင်း မှာ အ ထင် အ ရှား ရှိ ခဲ့ လဲ ? ဘယ် လို သ မိုင်း စာ အုပ် တွေ ကျောက် စာ တွေ မှာ ရှိ လဲ ? ဘယ် လို တ ရား ဝင် ရုံး သုံး စ ကား ဖြစ် ခဲ့ လဲ ဆို တာ ဘယ် မှာ ရှာ လို့ တွေ့ မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။ ဘယ် လူ မျိုး တွေ သုံး လဲ ဆို တာ သိ မှာ ပါ ။ ဘယ် လူ မျိုး က တ ကျော့ ပြန် ဖန် တီး လဲ ဆို တာ လဲ အ ထင် အ ရှား ပဲ ။
နောက် တ ခု က အ ခု ဘ င်္ဂ လား ဒေ ရှ် အ ခြေ ခံ ဥ ပ ဒေ ပြင် ဆင် ချက် ၁၅ မှာ နိုင် ငံ တွင်း မှာ ရှိ တဲ့ လူ တွေ ကို ဘ င်္ဂ လီ လို့ သတ် မှတ် မယ် တဲ့ နိုင် ငံ သား ကို ဘ င်္ဂ လား ဒေ ရှီး လို ခေါ် မယ် တဲ့ ။ စစ် တ ကောင်း တောင် တန်း ဒေ သ က ဘ င်္ဂါ လီ မ ဟုတ် သူ တွေ (Chakma, Tripura, Marma) ကို လစ် လျူ ရှု ထား တယ် ။ ဒီ လူ မျိုး ဆို တာ ခေါ် ချင် တိုင် ခေါ် ၊ သတ် မှတ် ချင် တိုင်း သတ် မှတ် လို့ မ ရ ဘူး ' သွေး ' က စ ကား ပြော တယ် ။ Francis Buchanan စာ အုပ် ထဲ မှာ လဲ လူ စိမ်း တွေ Strangers တွေ လို့ သုံး နှုန်း ထား ပါ သေး တယ် ။
အ ခု ဆို စဉ်း စား တတ် သူ တိုင်း သိ နေ ပြီး ရို ဟင် ဂျာ ဆို တာ ရ ခိုင် ပြည် မှာ နေ သူ ( ရ ခိုင် ဂ ) ဆို တာ ပဲ ။ အဲ ဒါ နဲ့လူ မျိုး အ မည် ဘယ် လို မှ မ ဆိုင် ဘူး လေ ။ အဲ ဒါ ကို ဘ င်္ဂ လီ တွေ က ရ ခိုင် ပြည် မှာ နေ သူ ဆို ပြီး ပုံ မှား ရိုက် တာ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/11/20130အကြံပြုခြင်း
ချင်းမျိုးနွယ်စု မဟုတ်ဟု နာဂလူမျိုးများ တုန့်ပြန်
ကချင်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိပါတယ်။လို့ရေးမယ့်အစားကချင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိပါတယ်လို့ရေးရင်ပိုကောင်းမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချင်းမျိုးနွယ်စု (၅၃) စုမှာ နာဂမျိုးနွယ်စု မပါဝင်ကြောင်း နာဂလူမျိုးများက ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း ယုဇနဟိုတယ်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရွာငံမဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းရဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု (၁၃၅) မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်အစိုးရလက်ထက်က စာရင်းပြုစုရရှိလာခဲ့သည်ကို သိရှိလိုကြောင်း မေးမြန်းချက်အပေါ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်ဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ နာဂကျောင်းသားလူငယ်များအဖွဲ့ချုပ်(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးနော်အောင်ဆန်းက ဒီကနေ့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“နာဂလူမျိုးဟာ သီးခြားလူမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသိလို့ပဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒမှာ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုပြီးတော့ ထည့်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့နေရာက ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတစ်ယောက်က ဒီလိုပြောလိုက်တာဟာ ခုနကပြောတဲ့ ချင်းမျိုးနွယ်စုထဲမှာ နာဂလူမျိုးဟာ မျိုးနွယ်စုတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နာဂလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင် အထဲထဲမှာ စိတ်အနာတရဖြစ်စေပါတယ်”
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လေရှီး၊ လဟယ်နဲ့ နန်းယွန်းမြို့နယ်တို့ကို စုစည်းပြီး နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၅၆(က)မှာ အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် နာဂမျိုးနွယ်စုဟာ ချင်းတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုကြီးမှာ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး
မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစာရင်း ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှုမ်း ၊ ဆိုပြီး ( ၈ မျိုး ) ရှိပါတယ် ။
ကချင်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၂ မျိုး ရှိပါတယ်။(၁) ကချင် Kachin(၂) တရုမ်းTaron Taron(၃) ဒလောင် Dalaung (၄) ဂျိန်းဖော Jinghpaw(၅) ဂေါ်ရီ Guari(၆) ခခူ Hkahku(၇) ဒူးလန်း Duleng(၈) မရူ (လော်ဝေါ်) Maru (Lawgore)
(9) ရ၀မ် Rawang(၁၀) လရှီ (လချိတ်) Lashi (La Chit)(၁၁) အဇီး Atsi(၁၂) လီဆူး Lisu
ကယားမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၉ မျိုး ရှိပါတယ်။(၁၃) ကယား Kayah(၁၄) ဇယိမ်း Zayein(၁၅) ကယန်း (ပဒေါင်) Ka-Yun (Padaung)(၁၆) ကဲ့ခို Gheko(၁၇) ဂေဘား Kebar(၁၈) ဘရဲ့ (ကယော) Bre (Ka-Yaw)(၁၉) မနုမနော Manu Manaw
(၂၀) ယင်းတလဲ Yin Talai(၂၁) ယင်းဘော်
ကရင်တွင် လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁၁ မျိုး ရှိပါတယ်(၂၂) ကရင် Kayin(၂၃)ကရင်ဖြူ Kayinpyu(၂၄) ပလေကီး Pa-Le-Chi (၂၅) မွန်ကရင် (စာဖြူ) Mon Kayin (Sarpyu)(၂၆) စကော Sgaw(၂၇) တာလှေပွား Ta-Lay-Pwa(၂၈) ပကူး Paku
(၂၉) ဘွဲ Bwe(၃၀) မော်နေပွား Monnepwa(၃၁) မိုးပွား Monpwa(၃၂) ရှူး (ပိုး) Shu (Pwo)
ချင်းမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၅၃ မျိုး ရှိပါတယ် ။(၃၃) ချင်း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)(၃၄) မေ့ထေး (ကသည်း) Meithei (Kathe)
(၃၅) ဆလိုင်း Saline(၃၆) ကလင်ကော (လူရှေ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)(၃၇) ခမီ Khami(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami
(၃၉) ခေါနိုး Khawno(၄၀) ခေါင်စို Kaungso(၄၁) ခေါင်စိုင်ချင်း Kaung Saing Chin(၄၂) ခွာဆင်းမ် Kwelshin (၄၃) ခွန်လီ (ဆင်) Kwangli (Sim)(၄၄) ဂန်တဲ့ (လင်တဲ) Gunte (Lyente)(၄၅) ဂွေးတဲ Gwete(၄၆) ငွန်း Ngorn
(၄၇) ဆီစာန် Zizan(၄၈) ဆင်တန် Sentang(၄၉) ဆိုင်းဇန် Saing Zan(၅၀) ဇာဟောင် Za-How(၅၁) ဇိုတုံး Zotung
(၅၂) ဇိုဖေ Zo-Pe(၅၃) ဇို Zo(၅၄) ဇန်ညှပ် Zahnyet (Zanniet)(၅၅) တပေါင်Tapong(၅၆) တီးတိန် Tiddim (Hai-Dim) (၅၇) တေဇန် Tay-Zan(၅၈) တိုင်ချွန်း Taishon(၅၉) သဒို Thado(၆၀) တောရ် Torr(၆၁) ဒမ် Dim (၆၂) ဒိုင် (ယင်ဒူး) Dai (Yindu)(၆၃) နာဂ Naga(၆၄) Tanghkul(၆၅) Malin(၆၆) Panun(၆၇) Magun(၆၈) Matu(၆၉) Miram (Mara)
(၇၀) Mi-er(၇၁) Mgan(၇၂) လူရှိုင်း (လူရှေ) Lushei (Lushay)(၇၃) Laymyo(၇၄) Lyente(၇၅) လောက်တူ Lawhtu
(၇၆) လိုင် Lai(၇၇) လိုင်ဇို Laizao(၇၈) ၀ါကင်းမ် Wakim (Mro)(၇၉) Haulngo(၈၀) အနူး Anu(၈၁) အနန် Anun
(၈၂) Oo-Pu(၈၃) လင်းဘု Lhinbu(၈၄) အရှိုAsho (Plain)(၈၅) Rongtu
ဗမာမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၉ မျိုး ရှိတယ်။(၈၆) ဗမာ Bamar(၈၇) ထားဝယ် Dawei(၈၈) မြိတ် Beik(၈၉) ယော Yaw (၉၀) ယဗိန်း Yabein(၉၁) ကဒူး Kadu(၉၂) ကနန်း Ganan(၉၃) ဆလုံ Salon(၉၄) ဖွန် Hpon
မွန်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၁ မျိုး ရှိပါတယ်။(၉၅) မွန် Mon
ရခိုင်မှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၇ မျိုး ရှိပါတယ်။(၉၆) ရခိုင် Rakhine(၉၇) ကမန်လူမျိုး Kamein(၉၈) ခမွီး Kwe Myi (၉၉) ဒိုင်းနက် Daingnet(၁၀၀) မရမာကြီး Maramagyi(၁၀၁) မြို Mro(၁၀၂) သက် Thet ရှမ်းမှာ လူမျိုးစု စုစုပေါင်း ၃၃ မျိုး ရှိပါတယ်(၁၀၃) ရှမ်း Shan(၁၀၄) ယွန်း (လော) Yun (Lao)(၁၀၅) ကွီ Kwi(၁၀၆) ဖျင် Pyin
(၁၀၇) ယောင် Yao(၁၀၈) ဓနော Danaw(၁၀၉) ပလေး Pale(၁၁၀) အင် Eng(၁၁၁) စုံ Son(၁၁၂) ခမူ Khamu
(၁၁၃) ကော် (အခါ အီကော) Kaw (Akha-E-Kaw)(၁၁၄) ကိုးကန့် Kokant(၁၁၅) ခန္တီးရှမ်း Khamti Shan
(၁၁၆) ဂုံရှမ်း Hkun(၁၁၇) တောင်ရိုး Taungyo(၁၁၈) ဓနု Danu(၁၁၉) ပလောင် Palaung(၁၂၀) မြောင်ဇီး Man Zi
(၁၂၁) ယင်းကျား Yin Kya(၁၂၂) ယင်းနက် Yin Net(၁၂၃) ရှမ်းကလေး Shan Gale(၁၂၄) ရှမ်းကြီး Shan Gyi
(၁၂၅) လားဟူ Lahu(၁၂၆) အင်းသား Intha(၁၂၇) အိုက်ဆွယ် Eik-swair(၁၂၈) ပအိုဝ်း Pa-O(၁၂၉) တိုင်းလွယ် Tai-Loi
(၁၃၀) တိုင်းလျမ် Tai-Lem(၁၃၁) တိုင်းလုံ Tai-Lon(၁၃၂) တိုင်းလေ့ Tai-Lay(၁၃၃) မိုင်းသာ Maingtha(၁၃၄) မောရှမ်း Maw Shan(၁၃၅)၀ Waအားလုံးပေါင်း လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးပါ ။ </span>
၁၂-၃-၂၀၁၃ မှာ ကျရောက်တဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့ ၈၃နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ယုံကြည်ချက် by Zay Latt on Monday, March 11, 2013 at 9:32am ·
ကျွန်တော်ငယ်ငယ် ၁၅နှစ်သားလောက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဆုံခဲ့ဘူးတယ်ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရွှေတိဂုံအနီး တော်လှန်ရေးပန်းခြံမှာ တပ်မတော်သားတွေကို" အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို ချေမှုန်းကြ" လို့ စစ်ထွက်မိန့်ခွန်းပြောပြီး တော်လှန်ရေးခရီး ထွက်လာတယ်။
ကျွန်တော် ရက်စွဲတော့ တိတိကျကျ မမှတ်မိတော့ဘူး။ တော်လှန်ရေးနေ့က မတ် ၂၇ ဆိုတော့ အဲဒီနား ၀န်းကျင်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက သာယာဝတီခရိုင် ကြို့ပင်ကောက်မြို့က နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ရှမ်းစုရွာလေးမှာ ရောက်နေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့က ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေက လေယာဉ်ပျံတွေနဲ့ ဗုံးတွေကြဲ၊ စက်သေနပ်တွေနဲ့ပစ်ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့က ညဘက်မောင်းလာပြီး မနက်ရောက်လာကြတာဗျ။ ရောက်လာပြီး အိပ်တယ်။ နေ့ခင်းကြမှ နိုးတယ်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်စကားဖြတ်ပြောရအုံးမယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုထဲမှာ ဦးလေးတော်တဲ့ ဗိုလ်မင်းခေါင်ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်မင်းခေါင်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှုးလုပ်နေတယ်။ သူက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တော်လှန်ရေးခရီးထွက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူ ပါလာပြီး ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတည်းတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်လာတည်းတော့ နေ့လည်မှာ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်အတွက် ရေတို့ ဘာတို့ ခပ်ပေးရတာပေ့ါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေချိုးတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ ကျွန်တော့်ဦးလေး တစ်ယောက်ရယ်က ရေခပ်ပေးရတယ်ဗျ။
သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နာမည်ဟိုးလေးကျော်နေတာ။ ဂျပန်ခေတ် တစ်ခေတ်လုံး ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲ အားကိုးပြီးတော့ နေကြတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော်လဲ စကားပြောချင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်က " ဗိုလ်ချုပ် ကျွန်တော် စစ်ထဲဝင်ချင်တယ် " ပြောတာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက " မင်းကျောင်းနေလား " တဲ့။ ကျွန်တော်က " ဟုတ်ကဲ့ နေပါတယ်"။ " ဘယ်နှစ်တန်း ရောက်ပလဲ " တဲ့။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ အတန်းပြောတာပေါ့။ " ခုနှစ်တန်း ဖြေပြီးပြီ" လို့ဆိုတော့ သူဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ သူ့မှာစစ်တိုက်မဲ့ သူတွေရှိတယ်တဲ့။ သို့ပေမဲ့ သူ့မှာ ပညာတက်တွေ လိုတယ်တဲ့။ မင်းပညာတက်အောင်သင်လို့ ပြောတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ " ငါ ပညာတက်အောင်သင်ရမယ်။ ပညာတက်မှ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ် " ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်း ကျွန်တော်ဆယ့်ခွန်၊ ဆယ့်ရှစ်သား ကတည်းက စာနယ်ဇင်းလောကထဲ ၀င်ခဲ့တယ်။ စာတွေသင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာသမားဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကြိုးစားခဲ့လို့လဲ သတင်းစာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သတင်းစာသမားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ယုံကြည်တာတော့ ပညာတက်မှ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ် ဆိုတာပါပဲ။
( ၁၂-၃-၂၀၁၃ မှာ ကျရောက်တဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့ ၈၃နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အမှတ်တရပါ။ ဘဘ အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ )
Zaw Wann Maung မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစာရင်း ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှုမ်း ၊ ဆိုပြီး ( ၈ မျိုး ) ရှိပါတယ် ။
(၁၃၀) တိုင်းလျမ် Tai-Lem(၁၃၁) တိုင်းလုံ Tai-Lon(၁၃၂) တိုင်းလေ့ Tai-Lay(၁၃၃) မိုင်းသာ Maingtha(၁၃၄) မောရှမ်း Maw Shan(၁၃၅)၀ Waအားလုံးပေါင်း လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးပါ ။
OPPOSITE EYE (ခ) ဗိုလ်နေလင်းမောင် (ခ) စွေစောင်းသို့
ခွန် ဒီးယမ်'s status.
Written by အဂ္ဂ (TUESDAY, JANUARY 15, 2008)
ငါ့ညီ … မင်းက စစ်ဗိုလ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်တယ်၊ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ဘယ်လို ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ပြောနေရအောင် မင်းတိုက်ပွဲ ဘယ်နှစ်ခါ တိုက်ဖူးသလဲ။ သေနတ် ဘယ်နှစ်ချက် ဖောက်ဖူးသလဲ။ မင်း ရုရှားကို သွားဖို့အတွက် အခန်းထဲမှာ စာကုန်းကျက်ပြီး စက်ပစ်ကွင်းကို ရှောင်ခဲ့တယ်။ မင်းနဲ့ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ (အပတ်စဉ်တူ) ရှေ့တန်းမှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေရချိန်မှာ (ဒါပေမယ့် မင်းလိုတော့ ဇိမ်နဲ့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ) မင်းက ရုရှားတိုင်းပြည်က (မင်းတို့ရဲ့ အနှိပ်စက် ခံနေရသူတွေရဲ့) ပိုက်ဆံနဲ့ စာသွားသင်တယ်ဆိုပြီး လေလွင့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ Chatting ခေတ်တုန်းကလည်း တနေကုန် Chatting ၀င်ပြီး Chatting ခဲ့ကြသလို၊ Blog တခေတ်ကျပြန်တော့လည်း လိုက်ပြီး Blog ပြန်တယ်။ ဘယ်မှာလဲ မင်းပြောတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတာ။ မင်းပြောနေတာကရော ဘယ်လောက်အထိ ခိုင်လုံနေလို့လဲ။
ကောင်းပြီ … မင်းနဲ့ တပတ်စဉ်ထဲ ဆင်းတဲ့ ညီလေးတယောက်ဆီက သိရသလောက် ပြောရရင် (သူ့ကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် သိပ်တိတိကျကျ မပြောသေးဘူး) မင်းဟာ ခုနက ပြောသလို စာကို ကြက်တူရွေး ကျက်သလို ကျက်ပြီး ရုရှားရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ DSA ရဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ Training လုပ်တာကိုတောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါ မင်းဘာပြောဦးမလဲ။ ရှားရှားပါးပါး သင်ခွင့်ရတဲ့ လက်ဝှေ့သင်တန်းကို ရှောင်ခဲ့တာ မင်းဘာပြောဦးမလဲ (ကြောက်လို့လေ)။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေက ဒိုက်အကြိမ် (၁၀၀)လောက် ထိုးနိုင်ချိန်မှာ မင်းဟာ ၁၀ကြိမ်လောက်နဲ့ ဟောဟဲလိုက်နေတာ မင်းငြင်းဦးမလား။ တာဝန်ခွဲတဲ့ အချိန်ကျတော့ အကြိမ် (၁၀၀)ထိုးနိုင်တဲ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေက ရှေ့တန်းသွား၊ (၁၀)ကြိမ်နဲ့ ဟောဟဲလိုက်နေတဲ့ မင်းကို အမောပြေသွားအောင် ရုရှားကို သွားခိုင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားကို ငါပြောလို့ မင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အပတ်စဉ်တူ သူငယ်ချင်းတွေကို ရန်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့နော်။ အဲဒါ ယောင်္ကျားကောင်းတွေရဲ့ အကျင့် မဟုတ်ဘူး။
မင်းနဲ့ အပတ်စဉ်တူ သူငယ်ချင်းတွေက ရှေ့တန်းမှာ “မတရားသော စစ်”ကို တိုက်နေရတာဟာ စစ်အာဏာရှင်က သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ပြီး တိုက်ခိုင်းနေလို့ပါ။ မင်းလိုသာ Blog တွေ၊ Internet တွေ သုံးခွင့် ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဟာ စစ်အာဏာရှင် အကြီးစားတွေဆီ မရောက်သေးခင်မှာ နီးစပ်တဲ့ မင်းဆီ အရင်လှည့်လာလိမ့်မယ်။ မင်း ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ လက်အောက်ငယ်သား တပ်မတော်သားတွေကို နှိပ်စက်တဲ့၊ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်တဲ့၊ သူတို့ရဲ့ မိန်းမတွေကို ကြာခိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို ရှေ့တန်းမှာ နောက်စေ့ကို Gun Shot နဲ့ ဖွင့်လိုက်တဲ့ သတင်းတွေကိုလေ …။ အခုတော့ အဲဒီလို အဆင့်တင် မဟုတ်တော့ဘူး။ မင်းတို့ အရာရှိ အချင်းချင်းကို အဆင့်အတန်း ခွဲထားတဲ့အတွက် Gun Shot လုပ်ချင်နေပြီဆိုတာ မင်းသိလား။ အထူးသဖြင့် မင်းလိုကောင်မျိုးပေါ့။ မင်းတို့ အပတ်စဉ်တူ သူငယ်ချင်းထဲမှာ မင်းအညံ့ဆုံး။ ဒါပေမယ့် မင်း အခွင့်အရေး အရဆုံး။ စာအံနိုင်တာနဲ့ စာတတ်တာ မတူဘူး။ Urban Squad ဆိုတာ မင်းသိလား၊ Assault ဆိုတာ မင်းသိလား၊ Platoon ဆိုတာ မင်းသိလား။ အေးပေါ့ကွာ … သိတဲ့ မင်းသူငယ်ချင်းတွေက ပင်ပန်းတာတွေလုပ်၊ မသိတဲ့ မင်းကတော့ ကြော့ကြော့လေးနေပေါ့ … မဟုတ်ဖူးလား။
ဒါပေမယ့် … မသိသေးရင် သိအောင် ကြိုးစား။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အပေါ်မှာလည်း မသင်္ကာမဖြစ်နဲ့၊ မငြိုငြင်နဲ့၊ စိတ်ကို ဖြူဖြူစင်စင်ထား။ ငါတို့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ ဘက်မှာလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို လျှို့ဝှက်ပြီး ဆန့်ကျင်နေတဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော်သားတွေ ရှိနေပြီဆိုတာ မင်းသိအောင် ပြောထားလိုက်မယ်။ သိပ်တိကျအောင် မပြောသေးတာကတော့ သူတို့ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ ငါတို့အတွက် အဖိုးတန်တဲ့ သတင်းတွေ မရမှာ စိုးလို့ပါ။ အဲဒါတော့ “မတိကျရကောင်းလား”လို့ အပြစ်တင် မစောဖို့ ကြိုပြီး တောင်းပန်ပါရစေကွာ။ မင်းကိုမင်း သိပ်တော်တဲ့ သိတတ်တယ်ဆိုတဲ့ မာနစိတ်ကို ပြင်။ စစ်သားကောင်း တယောက်ဆိုတာ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ရဲရမယ်။ ကိုယ်သင်ထားတဲ့ စစ်ပညာဟာ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကိုယ့်ထက် သိပ်တော်တဲ့ စစ်တပ်တွေနဲ့ လက်ရည်သွေးဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံစိတ်လောက် ထားရင်ကိုပဲ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ လက်နက်မဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ သံဃာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖို့အတွက် ဒီစစ်ပညာ သင်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်။ မင်းအသက် ငယ်သေးတယ်။ မင်းသိမယ်ဆိုရင် မင်းအတွက် နေ၀င်ချိန် မရောက်သေးပါဘူး။ အချိန်မီပါသေးတယ် ငါ့ညီ …။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) ဥက္ကဋ္ဌကြီးအတွက်။
Nik Nayman's photo.
ကိုယ့်သားသမီးတွေကျတော့ နိုင်ငံခြားမှာ သွားထား၊ တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံသား ခံယူခိုင်းထားပြီး သူများ သားသမီးတွေကျတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။
နိုင်ငံတစ်ခု တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ရာ Human Resources လို့ခေါ်တဲ့ လူသားစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ အင်မတန်မှ အရေးပါတယ်ဆိုတာ အားလုံးက လက်ခံထားတယ် မဟုတ်လား။ ခေတ်မီနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေရှိမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကြံဆောင်နိုင်မယ်။
ဒါလည်း မှန်တယ်။ ဒီတော့ ဦးနှောက်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ အခြေခံ ကျတယ်။ လူတစ်ဦးမှာ ဦးဆောင်တာဟာ ဦးနှောက်။ တိုင်းပြည်မှာ ပညာတတ်တွေ ပေါများပြီး အဲဒီပညာတတ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်က ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ပါမှ ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာကို ရမယ်။ ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲ ငွေဘယ်လို ထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ Personal Economy ကိုသာ Higher Level ထိ တစ်ဖက်ကမ်းခပ် တတ်မြောက်ပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း တွေးခေါ်ကြံဆမှုမှာတော့ Zero Level က မတက်ရင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးက ကောင်းပါလျက် လူတွေက ဖျက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကဲ … အဲဒီလို အရေးကြီးတဲ့ ဦးနှောက်တွေ ရှင်သန်ဖို့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ပြုစုကြမလဲ။ ယနေ့ခေတ်လူငယ် မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအောင် တွေးခေါ်မှုပညာတွေ အထူးလေ့ကျင့် ပြုစုပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လေ့ကျင့်ပြုစုပေးတဲ့နေရာမှာ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေ လန်းဆန်းတက်ကြွနေဖို့လဲ လိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဓိက ပြဿနာက အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ် … ဒါတွေ သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် နောင်တစ်ချိန် ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရမယ့် လူငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေဟာ လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး အသုံးချလို့ မရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိ ကြီးမားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းမှာ အရက်ပြဿနာ ရှိကြတယ်ဗျာ။ သူတို့ဆီမှာ အရက်စွဲရောဂါကို မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆေးလိပ်အန္တရာယ်တို့နဲ့ တန်းတူထားပြီး အစိုးရဌာနတွေ၊ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက တစ်နိုင်ငံချင်းရော နိုင်ငံအများ စုပေါင်းပြီးပါ အလေးအနက်ထား တိုက်ဖျက်နေကြပါတယ်။
ကဲ …ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာရော…..?
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာမှ စီးပွားရေး တိုးတက်မယ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (Myanmar Investment Commission-MIC) က အရက်၊ ဘီယာနဲ့ ဆေးလိပ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခွင့်တွေ၊ တင်သွင်းခွင့်၊ ဖြန့်ဖြူးခွင့်၊ ရောင်းချခွင့်တွေကို လက်သိပ်ထိုး တိုးတိုးတိတ်တိတ်ခွင့်ပြုချက် (Permit) များ ပေးနေတော့ မခက်ပါလား။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာတော့ (Permit) စနစ်များ စွန့်လွှတ်သင့်ပြီထင်ပါရဲ့ဗျာ။
- MIC က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရက်သမား၊ ဘီယာသမား၊ ဆေးလိပ်သမားဦးရေ တိုးပွားအောင် လုပ်နေတာလား?
- Permit တွေ အပေါ်ကများ မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေးတွေ၊ ဆီဦးထောပတ်လေးတွေ စားနေရလို့လား?
- နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည် လူငယ်လူရွယ်တွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ယဉ်ပါးကြီးပြင်းလာသူတွေ ဖြစ်စေချင်တာလား?
- ကိုယ့်သားသမီးတွေကျတော့ နိုင်ငံခြားမှာ သွားထား၊ တိုင်းတစ်ပါး နိုင်ငံသား ခံယူခိုင်းထားပြီး သူများသားသမီး တွေကျတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့ သဘောလား?
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကြီးအနေနဲ့ အရက်၊ ဘီယာနဲ့ ဆေးလိပ်တွေပဲ ရင်းနှီးဖို့ လုပ်တတ်ပါသလား?
MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းဟာ ဂန္ဓ၀င်မြောက်လှတဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်များကို ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသလည်း အတော်ပြောတတ်တယ်။ ပျော်တတ်တယ်ဆိုပါတော့ (ကော့သောင်းမိုတယ်မှ အဆိုတော်လေးများ၊ ထိုင်းလှေပိုင်ရှင်တွေ ပို့ပေးတဲ့ အချောအလှလေးများက သူ့အကြောင်း ပိုသိပါမည်)။
MIC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာနဲ့ သတင်းစာဆရာတွေ၊ မီဒီယာတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဂုံးကျော်တံတားကြီး ၄ စင်းကို ၄ လနှင့် အပြီးဆောက်မယ်လို့ အပြောင်မြောက်ဆုံး ဟာသပျက်လုံးကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရ ပြောခဲ့ပါသေးသည်။
“၁ နာရီနှင့်အပြီး လုပ်ပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လက်သုံးစကားကတော့ အတော်လေး ဟတ်ထိတယ်လို့ ဆိုကြပါ၏ (ယုံမိတဲ့လူတွေအတွက် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်)။ လူအထင်ကြီးမယ့် စကားလုံးအလှလေးတွေများ အချိန်ရှိတိုင်း စဉ်းစားနေပါသလား ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။
စကားပြောကောင်းတယ်လို့ အနားက လူတွေမြှောက်ပေးတိုင်း နားမယောင်စေချင်ပါဘူး။ တစ်ကယ်က ၀န်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဟာ အင်မတန်ရှားပါးတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် လျှာတစ်ချောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေက လျှာရှည်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကို စိတ်မချလို့များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် ကိစ္စတွေကို နောက်ဆုတ်သွားကြလေရော့သလား။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ခွင့်ပြုချက် မရတဲ့ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်ကုမ္ပဏ်ီတွေကသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ MIC ရှိတယ်၊ ချောင်တယ်ဟေ့ဆိုပြီး ခြေဦးလှည့်လာကြတာလား မသိပေါင်ဗျာ။
ဒီတော့ကာ… MIC ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ … နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည် အနာဂါတ် လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကို ပန်းကောင်းအညွန့်ချိုး လုပ်ရပ်တွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သားသမီးရှင်များမှ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့လျှာ ပေ ၁၀၀ ကျော် ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်ဆိုတာ သိစေအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ … ။
(ရေးသားသူ - LEP)။
နိုး နိုး .... စုံကော်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို လက်ခံ/မခံကို ဒေသခံတွေက အရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာ ။ ဦးသိန်းစိန်က တစ်ကွက်ကျော်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ မလိုအပ်သေးဘူး ။
အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူတွေတောင် မဖတ်ရသေးဘူး ၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ ကို ပြည်သူတွေ နှမ်းစေ့တစ်စေ့မျှ
မယုံကြည်သည့် လူများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပုံကတော့ ..... သင်းတယ် ။ ဖွတ်ကျင့် ဖွတ်ကြံ ။
ဒီလုပ်ရပ်ဟာ စုံကော် ၊ ဒေါ်စုနှင့် ဒေသခံတွေကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်တာပဲ ။ မလုပ်သင့် မလုပ်ကောင်း ပါဘူး ဦးသိန်းစိန် ။ ကိုယ့်ကို လာကူတဲ့ ဒေါ်စုကို ချောက်ချပုံကတော့ ကန်းလွန်း ပါတယ် ။
မရှက်ဘူးလား ခင်ညာာာာ ၊ မီးလောင်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ ထိုင်းဆေးရုံမှာ ဆေးကုသဆဲပဲ ။
ထိုင်းတွေက ဂက်စ်လိုချင်လို့သာ ပြုံးနေတာ .... စိတ်ထဲမှာ သရော်နေမှာ ။
မနက်ဖြန် လက်ပတောင်းကို အမေစု ကိုယ်တိုင်သွားမှာ ၊ အစီရင်ခံစာကို ဒေသခံတွေကို နားလည်အောင် ရှင်းပြမှာ ။
ပြေလည်နိုင်ကောင်း ပြေလည်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ဖွတ်ဖျက်သွားပါပြီ ။ တော်ချက်က ၉ လောက်ရှိတယ် ဖွတ်အစိုးရပေပဲ ။
နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့ ၊ စီးပွားရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့ မျက်လုံးက ကြီးပါ့ ။
စုံကော်ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ဒေသခံတွေ ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးပြီးမှ သဘောတူတယ်ဆိုရင် ..... အကောင် အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီကို ဒေသခံတွေ လက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းပေး ရမှာပေါ့ ။
ဒါနဲ့များ အုပ်ချုပ်ရေး ကျွမ်းကျင်တယ်တဲ့ ။ ဖွတ်ကြား ။ သေနတ်ချိန်ထားတုန်းကပဲ အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ ဖွတ်ကြားတွေ ။
ကဲ ..... ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ထဲမှာပါပဲ .... လက်ပတောင်းဒေသခံတွေ လက်ခံ/မခံကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ ။
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသခံ သုံးဦးမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတအား အရေးယူပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို တရားရုံးမှ ပလပ် လိုက်ကြောင်း တရားလိုဘက်မှ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ဦးစောကျော်ကျော်မင်း ကပြောသည် ။
တရား ဆွဲဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရာတွင် မြို့နယ် တရား သူကြီး ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေက ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုဖွင့်လှစ်ရန် အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပါ၍ အမှု မဖွင့် လှစ်ကြောင်း အမိန့်ချခဲ့သည်။
LUNCH WITH AUNG SAN SUU KYI (Rangoon, March 10, 2013)
I had lunch today with Aung San Suu Kyi. Today is my birthday. She didn't know it, but she gave meapresent that I value most, that no money can buy: Inspiration.
Photo credit to Sam Rainsy
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒုရဲမှုးကြီး သွင်ကိုကို၏စာ
-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒုရဲမှုးကြီး သွင်ကိုကို၏စာ
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီရင်ခံစာထွက်ပြီးမှ လိုအပ်လျှင် တင်ပေးပါ )
လက်ပံတောင်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲမှု နောက်ကွယ်မှစီစဉ်ညွှန်ကြားသူ အဓိကတရားခံ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့် သပိတ်စခန်းကို အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့မှုကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အားယူနေခါစ တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက် များစွာအရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သည့် သမိုင်းဆိုးကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုနိုင်လျှင် အစိုးရနှင့်အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအကြား အရှုပ်ကြီးရှုပ်ကာ ညှိနှိုင်းမရ ဆွေးနွေးမရနှင့် ရရှိပြီးသား နားလည်ယုံကြည်မှုများပင် ပျက်ပြားပြီး ယခင်ကထက် ပိုမိုဆိုးရွားသော အနိဌာရုံမြင်ကွင်းများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိကာ မြန်မာပြည် အနာဂတ်အရေး ရင်လေးစရာအဖြစ်မျိုး ကြုံရမှာကို စိုးရိမ်ပါသည်။
သို့အတွက် မိမိသိရှိထားသော ယင်းဖြိုခွင်းမှုကြီး၏ ဖြစ်စဉ်အမှန်အား အများပြည်သူ အချိန်မီ သိစိမ့်သောငှာ ဖွင့်ချအသိပေး လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဖြစ်ရပ်အမှန်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။
အဓိက စီစဉ်ညွှန်ကြားခိုင်းစေသူမှာ ယခင်စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဖြစ်သည်။
အခင်းဖြစ်သော တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ မတိုင်မီ ကိုးရက်အလိုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေ( အနားယူသွားပြီဟု တရားဝင် ကမ္ဘာသိ လူသိရှင်ကြား ကြေငြာခဲ့သော၊ အာဏာဆုပ်ကိုင် ထားလိုသော၊ ဘုရင်စနစ်ပြန်လည်ကျင့်သုံးရန် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော၊ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအရပ်ရပ်အား ထင်သလို မိမိပိုင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအပေါ် စေတနာပျက်ကွက်ခဲ့သော၊ ဆက်ရေးလျှင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင် အညံ့ခံအရှုံးပေးရမည့်သူက ) သည် လက်ရှိပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်တွယ်နှိမ်နင်းပစ်ရန် အမိန့်ပေး ခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရန် အမိန့်ပေးညွှန်ကြားရခြင်းမှာ ကြေးနီထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းအား အိုင်ဗင်ဟိုကုမ္ပဏီ မှ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ သို့ လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းစဉ်ကာလက ည ၁၂ နာရီအချိန် လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်တန့်ထားရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားချိန်တွင် ကြေးနီတန်ချိန် ၃၀၀ ခိုးထုတ်မှုကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
၄င်း ကြေးနီတန် ၃၀၀ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစု အကျိုးစီးပွားအတွက် ခိုးထုတ်ပေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ (ကြေးနီး တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းအမြတ်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက်လည်း အချိုးကျရှယ်ယာ ခွဲပေးရသည် ဟု သိရပါသည်။)
တကယ်လို့ စီမံကိန်းရပ်တန့်ရေး တောင်းဆိုမှုပြင်းထန်လာပြီး ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ အကျပ်အတည်း ဆိုက်လျှင် ကြေးနီခိုးထုတ်မှုကိစ္စ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေမိသားစုမှ လက်ဆောင်ပဏဏ္ဍာ ရယူထားသည့်ကိစ္စရပ်များသည် ဇယ်ဆက်သလို ပေါ်လာမှာကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြသဖြင့် ယခုလို စောစောစီးစီး နှိမ်နင်းဖြိုခွဲ ပစ်ရန် စီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုလည်း ငြင်းဆန်လို့ မရသော အမိန့်ဖြစ်သည်ကို သိသဖြင့် သူ့တာဝန် မဖြစ်စေရေးအတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ ညွှန်ကြားချက်အကြောင်း ခပ်ကြောကြော အသိပေး သလိုလို၊ တရားခံတာဝန်အား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ယူရမည့်သဘော ပွဲစားဆန်ဆန် ညွှန်ကြားရာ သမ္မတမှ သဘောမတူ၊ မလုပ်ရန်တားမြစ်ခဲ့၏။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက မည်သို့မှ ငြင်းဆန်ရန်မဖြစ်နိုင် ဟု ဆက်လက်တင်ပြသလိုလို အကြပ်ကိုင်ရာ သမ္မတက
“အဲဒါဆိုလည်း မင်းကိုခိုင်းတာ မင်းလုပ်ပေါ့၊ ငါ့ကိုခိုင်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ”
ဟုပြောလိုက်သောကြောင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက သူတစ်ယောက်တည်း ဆက်လုပ်ရန် စီစဉ်ရတော့၏။ ရဲမှူးကြီး သွင်ကိုကို (DSA -27) အား ခေါ်ယူပြီးလျှင် လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းကို ဖြိုခွင်း ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ထပ်ဆင့်အမိန့်ပေး၏။
“ဒီ ကိစ္စ မင်းတာဝန်ယူရမှာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ပြီးသွားရင် မင်းတစ်သက်စာ ကောင်းစားမယ်၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်လာရင်လည်း မင်းပဲခံစားပေတော့”
ဟု အပြတ် အမိန့်ပေးလိုက်ပြီး ၄င်းဒေသသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်မလာမီ အပြီးဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားလိုက်၏။
Bo Gyi Twin Koko(DSA 27)
Photo credit-Ko Han Win Aung
ယင်းကိစ္စ အလွယ်တကူ မအောင်မြင်နိုင်မှန်း ရဲမှူးကြီး သွင်ကိုကို သိသည်။ တဖက်မှလည်း အထက်မှ ပေးအပ်သောတာဝန်ကို မဖြစ်မနေ ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ရသည့် တစ်ပါတ်တာကာလလုံး သက်သတ်လွတ်စားသည်။ ဥပုသ်စောင့်သည်။
ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမဖြစ်ဘဲ အလိုလို ပြီးပြတ်စေကြောင်း တောင်းဆုအခါခါပြုလျှက် ဘုရားရှင်အား အချိန်ရသလို နားပူနားဆာလုပ်ခဲ့သည်။ အမိန့်အတိုင်း လုပ်ဖို့ ချီတုံချတုံ မဝံ့မရဲဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဒါတောင် ထိုအချိန်အထိ ယခုအသုံးပြုခဲ့သည့်ဗုံးလက်နက် အသုံးပြုရမည်ကို မသိသေး၊ သာမာန်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနှိမ်နှင်းရမည်ဟုသာ သိထားသည်။ လိုအပ်လျှင် ပိုမို အကြမ်းဖက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ အမိန့်သာ ရထား၏။
သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲခါနီး အနီးကပ်ဆုံးညအချိန်ကျမှ အမျိုးအမည်မသိ ဗုံးတွေ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သပိတ်စခန်းဝင်ရောက်စီးနင်းသော ရဲဝန်ထမ်းတွေ ကိုယ်တိုင်ပင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု စွမ်းအားကို မြင်တွေ့ ရသောအခါ ထိတ်လန့်တကြား ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်ကြရသည်ဆို၏။
ယခုအခါ ရဲမှူးကြီး သွင်ကိုကို မှာ အစကတည်းက သာမာန်ဖြိုခွင်းရမည့်အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှု၊ အေးချမ်းစွာပြီးဆုံးစေလိုမှု၊ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားကြား မိမိသမိုင်းအားနာမည်ပျက်စေနိုင်မှု၊ မိမိ မိသားစု အသက်ထက်ဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့် ဆက်လက်ရှင်သန်ရမည့်ဘ၀၊ စသည့်စသည့် သွေးပျက်လုမတတ် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုပေါင်းများစွာဖြင့် စကားပြောသည့်အခါ အသံတွေ တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေ၏။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီး အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်လာပါက သူသည် ပြေးမလွတ်သော အဓိက တရားခံစာရင်းမှာ ပါနေတာကို သိထား၏။ အမိန့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မိသဖြင့် ဓားစာခံ ဘဝရောက် သွားရသည့်အဖြစ်ကို နာကျည်းကြေကွဲနေကြောင်း သိရသည်။
ကံကြမ္မာဆိုးက သူ့မိသားစုအပေါ် သူ့စေတနာမပါဘဲ အတိုင်းအဆမရှိစွာ ရက်စက်ကလူ ပြုမူခဲ့လေပြီကော။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ မိသားစုတစ်ခု၏ လောဘဇောတိုက်မှုနှင့် ယုတ်မာသော ကြံစည်လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရသည့်အဖြစ်၊ တိုင်းပြည်ဖရိုဖရဲဖြစ်ရမည့် အခြေအနေ ကို မမြင်လို မကြားလိုတော့ပြီ။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူ အတူတကွ လက်တွဲဖြေရှင်းကြစေချင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် အဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ၊
ပြည်သူများလည်း ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာသုခ ပြည့်ဝကြပါစေ၊ ဟု နေ့စဉ် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သနေမိပါသည်။
ဖြစ်ရပ်အမှန်အတိုင်း အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော် အကျွန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း မကြားသိနိုင်သည့် ဝေးရာကမ္ဘာမှာ ရောက်ရှိနေသည့် ကိုယ် ဖြစ်ရပါစေသားအရှင်ဘုရား။
၁၂-၃-၂၀၁၃ မှာ ကျရောက်တဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်ရဲ့ ၈၃နှစ်မြေ...
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် (MIC) ဥက...